TVET Department နှင့် A.G.T.I Society တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် လျှပ်စစ်သင်တန်းများတွင် မိန်းကလေးများ လျှော? - Yangon Media Group
TVET Department နှင့် A.G.T.I Society တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် လျှပ်စစ်သင်တန်းများတွင် မိန်းကလေးများ လျှော?
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန TVET Department နှင့် A.G.T.I Society တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် လျှပ်စစ်သင်တန်းများကို မိန်းကလေးများလျှောက်ထားမည်ဆိုပါက ရည်းစားမထားရသော ကတိခံဝန်ချက်ရေးထိုးရ မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန TVET Department နှင့် ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း A.G.T.I Society တို့ပူးပေါင်းပြီး ယခုနှစ်ဒီဇင်ဘာတွင် Commercial Electrical Wiring Course ၃ဝ နှင့် Electrical Power Distribution LineCourse ၁၅ ဦးတို့ကိုခေါ်ယူပြီး အင်းစိန် ဂျီတီအိုင်တွင် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ရာ မိန်းကလေး များပါလျှောက်ထားနိုင်သော်လည်း ရည်းစားမထားရသော ကတိခံဝန်ချက်ကို ရေးထိုးရမည်ဖြစ်ကြောင်း သက်မွေးပညာ သင်တန်းကျောင်း (ဆာကူရာအင်းစိန်)မှ သိရသည်။
”မိန်းကလေးခေါ်ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ အများကြီး မခေါ်ဘူး။ တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်လောက်ပဲ ခေါ်တယ်။ ခေါ်ရင်လည်း မိဘတွေဘက်ကနေ ရည်းစားမထားရဆိုတဲ့ ကတိခံဝန်ကိုတော့ ရေးထိုးရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ပညာ သင်ကြားရေးဘက်ကို အဓိကဦးတည်တော့ ကျန်တဲ့အပိုင်း ကိုလိုက်ပြီးမထိန်းနိုင်ဘူး”ဟု သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (ဆာကူရာအင်းစိန်) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းဇော်မြင့်က နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ပြောသည်။
ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့်လျှပ်စစ်သင်တန်းများကို တက္ကသိုလ် ဝင် တန်းအောင်မြင်ထားသော အသက်(၁၇)နှစ်ပြည့်ပြီး (၂၃)နှစ်ထက်မကြီးသူ မည်သူမဆိုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါသင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ခုနစ်လအတွက် သင် တန်းကြေးမှာ တစ်လလျှင် ကျပ်နှစ်သိန်းကျသင့်မည်ဖြစ် ပြီး သင်တန်းတွင် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းအပြည့်အစုံဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း စာတွေ့ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လက်တွေ့ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် သင်ကြားပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သင်တန်းကိုတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ဂျီတီ အိုင်ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင် နီယာအသင်း၊ အခန်း (၃ဝ၃)၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ တွင်အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပြီး အင်းစိန်ဂျီတီအိုင်ကျောင်းဝင်းအ တွင်းရှိ သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (ဆာကူရာအင်းစိန်) တွင် နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက် နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းများကို တက်ရောက်ပြီးပါက ဂျပန် နိုင်ငံ Kinden Corp ကုမ္ပဏီမှ သင်တန်းဆင်းများကိုပြန် လည်အလုပ်ခန့်အပ်ပေးနေခြင်းများလည်းရှိကြောင်း သိ ရသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း (၄၈)ရပ်ကွက်တွင် မီးလောင်
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု လျှော့ချနိုင်ရေး ယခုလအပြီး ဓာတ်အားလိုင်း
ပေါ်တူဂီ တောင်ပေါ် မြို့ကလေး၌ ရိုးရာချောကလက် ပွဲတော်ကျင်းပ